ထိန်းသိမ်းသင်.သောယဉ်ကျေးမှု. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ထိန်းသိမ်းသင်.သောယဉ်ကျေးမှု.
Posted by ရွှေဘိုသား on Jun 23, 2011 in Copy/Paste | 12 comments
ကျွန်တော်. သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ရန်ကုန်ကနေ ရွှေဘို ပြန်ပြီး မိန်းမခိုးလာလို. ဘာမှမသိသေးပဲ မင်းကောင်မလေးကိုတော်တော်ချစ်တာပဲဟနော်ဆိုတော.
ဟိတ်ကောင်ရ ချစ်တော.ချစ်တယ်ဒါပေမဲ.ယူဖို. စိတ်ကူးမရှိသေးဘူးဟဆိုပဲ ဒါနဲ.မင်းကဘယ်လိုဖြစ်လို.ခိုးလာတာလဲဆိုတော.မှ ကိုယ်ဝန်က3လဖြစ်နေပြီဟတဲ.
ကျွန်တော်လည်း တော်တော်လေးကို အံ.သြသွားတာပေါ. ငါလည်းနောင်လည်း ယူမဲ.တူတူ မို.ကွာအခုဖျက်စီးမပစ်တော.ပါဘူး ကိုယ်.သွေးပဲဆိုပြီး ယူလိုက်တာတဲ.
ကျွန်တော် လည်းကောင်မလေးဘက်ကနေ တော်တော်ကိုဝမ်းသာပေးလိုက်ရတာပေါ. ဟုတ်တယ်လေ မယူတဲ.ကောင်နဲ.တွေ.ရင် ဒီကောင်မလေး ငယ်ငယ်၇ွယ်၇ွယ်
နဲ.အရှက်ကွဲအကျိုးနည်းဖြစ်ရအုံးမယ် အခုတော.ကောင်မလေးကိုတကယ်ချစ်တဲ.စိတ်ရယ် ကိုယ်.ရင်သွေးမို.ဖျက်မချပဲ ယူလိုက်တာဆိုတော. သူ.ကိုတောင်
တော်တော် လေးစားမိပါရဲ. တစ်ချို.မယူချင်သေးလို.ဆိုပြီး ဖျက်ချတဲ.လူတွေ အများကြီးရှိတယ်လေဗျာ အသက်အားဖြင်.တော. ငယ်ငယ်လေးရှိပါသေးတယ် အခုမှ
20 ၀န်းကျင်တွေပါပဲ ဘာပဲပြောပြောသူ.ကိုတော.ကျွန်တော် လေးစားတယ်ဗျ ကိုယ်.တာဝန်ကိုယ်ယူလို.ပါ ဒီနေ.ဒီချိန် အဲလိုမိန်းမကို ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် နဲ.ယူရဲ.တဲ.
သူ.ကိုလည်း တော်တော် ချီးကျူးမိတယ်ဗျ။ သူကလည်းပြောပါတယ် အဲလိုဖြစ်တုန်းကလည်း မူးနေလို.ဖြစ်တာပါတဲ.။ဘာပဲပြောပြော သူတာဝန်ယူတာကိုပဲ
ကျွန်တော် လေးစားတယ်ဗျ။ ဘာမှမဖြစ်သေးပဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆိုရင်တော. နှစ်ယောက်လုံးအတွက်ပိုကောင်းတာပေါ. အခုကျတော. အလောသုံးဆယ်
တွေဖြစ်ကုန်တာပေါ.။သူတို.လည်း ပြန်သွားရော စဉ်းစားမိတာက အဲဒီလို မင်္ဂလာမဆောင်ခင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာကလည်း ကိုယ်.နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်ဘူးလေဗျာ
သမီးရည်းစားတွေ အခုလိုမယူရသေးခင် ကျူးလွန်တာ မကောင်းဘူးပေါ.ဗျာ တစ်ချို.ကလည်း ယူချင်လို. မိဘတွေတားလို.မရအောင် ဖြစ်ကြတာလည်းရှိပါတယ် ဒါကလည်းကံကိုဘယ်သူကကြိုမြင်လို.လည်းဗျာ မကျူးလွန်တာကတော. ပိုကောင်းတာပေါ.။ဒီဟာကလည်း ကျွန်တော်ထင်တာကတော. ကောင်လေးဘက်ကပဲ စောင်.စည်းသင်.တယ်လို.ထင်တယ်ဗျ။ဘာ.လို.လည်းဆိုတော. ကျွန်တော်တို. မြန်မာ မိန်းကလေးတွေကတော.
အနောက်နိုင်ငံလို. မူးတာလည်းမရှိဘူးလေဗျာ အဲလောက်လည်း အရှက်မရှိတဲ.လူမျိုးမှမဟုတ်တာဗျာနော်။ ကျွန်တော်ထင်တာကတော. ကောင်လေးတွေက
ပိုစောင်.စည်း သင်.တယ်ဆိုတာကလည်း သူတို. ကဒီကိစ္စကိုမူးလို.ပဲဖြစ်ဖြစ် စောစောကပြောသလို လက်ထပ်ယူချင်လို.ပဲဖြစ်ဖြစ် တောင်းဆိုလာရင် မိန်းကလေးတွေကအရင်ကမှ သနားတတ်တဲ.အမျိုးလေဗျာ အခုလိုကိုယ်.ချစ်သူတောင်းဆိုတာဆိုတော.လည်း မဖြစ်ချင်လည်း လိုက်လျှောတာလို.ထင်တာပဲဗျာ
ကျွန်တော်.သူငယ်ချင်းဆိုလည်း သူမူးလို.ဖြစ်တာကို ဟိုကလိုက်လျှော ပေးတယ်လို.ပြောလို.ပါယောင်္ကျားလေးတိုင်းလို. လည်းမပြောပါဘူးဗျာ။
တစ်ချို.ကလည်း သတ်သတ်ကို ဖျက်ဆီးချင်တဲ. လူမျိုးတွေကလည်းရှိတယ်ဗျ အဲဒါကလည်းနှမချင်းမစာနာတဲ. လူတွေပဲဖြစ်မှာပါ
အကောင်းဆုံးကတော. မိန်းကလေးတွေကလည်း ကောင်လေးချိန်းတိုင်း မသွားသင်.ပါဘူးတကယ်ချစ်တဲ. သူဆိုရင်တော.အကြောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ.ဗျာ
အကြံနဲ. လူဆိုရင်တော. မိန်းကလေးဘက်ကပဲ နစ်နာမှာလေဗျာ
အကောင်းဆုံးကတော. နှစ်ဖက်လုံးက ထိန်းသိမ်းသင်.တယ်လို. ထင်ပါတယ်ဗျာ
ရွာထဲကယောင်္ကျားလေး တစ်ချို.လည်း စိတ်ဆိုးမယ်ဆို ကျွန်တော်ေ၇းမိတဲ.အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်
သမီးရည်းစားတွေ မယူရသေးခင် ကျူးလွန်တာ မကောင်းဘူးမဖြစ်ရပါဘူး..။
ဒါကို မကောင်းဘူးပြောတာက..ယဉ်ကျေးမှုမျက်နှာဖုံးတပ်ပြီး… လူသားရဲ့ မွေး၇ာပါအခွင့်အရေးကို ပိတ်တာမျိုးပဲ..။
ဖိုနဲ့မ .. အသက်ပြည့်ပြီးမှ..လိင်ဆက်ဆံတာ အပြစ်မှမဟုတ်တာ..။ မကောင်းတာမှမဟုတ်တာ..။
မိန်းကလေးက အလိုမတူပဲ.. အတင်းဆက်ဆံတာမျိုးကတော့.. မုဒိန်းမှုပဲ..။ သမီးရည်းစားမဟုတ်ပဲ.. သူများသားသမီး..အလိုမတူပဲ.. ကာမဆက်ဆံတာက.. လူယူတ်မာပဲ..။ မုဒိန်းကောင်ပဲ..။
မုဒိန်းမှုမြောက်ရင်…. ဥပဒေအရ အရေးယူပေါ့..။
သမီးရည်းစားတွေ .. တယောက်အကြောင်းတယောက်ပိုသိအောင်.. ကိုယ်လက်နှီးနှောခွင့်ရှိပါတယ်..။ ငယ်ရွယ်စဉ် ကာမစည်းစိမ်ခံစားရပါတယ်..။ ဒါပေမဲ့.. ငယ်တုံးကိုယ်ဝန်မရှိလာအောင်.. ထိမ်းသိမ်းပေါ့..။
စိတ်ချလက်ချဆက်ဆံနိုင်တဲ့.. အချိန်ဇယားတွေ. ကာကွယ်.ဆေးတွေကို.သိတဲ့တတ်တဲ့ပညာရှင်တွေက..အသိပညာပေးပေါ့..။
မှန်ပါတယ် … ဒါဟာ သူတို့ ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ရွေးချယ် လွတ်လပ်ခွင့်ပဲလေ …. အဲလိုမနေကြတဲ့ စုံတွဲတွေလဲအများကြီးရှိသလို … နေမိကြသူတွေဟာလည်း ကာကွယ်တတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် .. ကောင်လေးက ကိုယ့်ကို တစ်ကယ်ချစ်လို့ လက်ထပ်ရင်တော်သေးတာပေါ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်တာဝန်မယူနိုင်ပဲ ဖျက်ဆီးပစ်ရရင် မိခင်မှာရော အသက်ကိုပါထိခိုက်နိုင်ပါတယ် အဲဒါကြောင့် မလုပ်ဖို့မတားနိုင်တဲ့ တူတူ ပညာပေးတာဟာ အကောင်းဆုံးလို့ ထင်ပါတယ် …
အမှန်ပဲ သူကြီးရေ ။ အပြည့်အဝ ထောက်ခံပါတယ် ။
ရွှေဘိုသားပြောတာ မှန်တယ် ။
ဘယ်ဟာကိုပဲ လက်ခံလက်ခံ ……………
ကိုယ့်ရဲ့ အတ္တကိုလိုက်ပြီး စကားလုံးလှလှတွေနဲ့ ဖုံးဖိနေကြတာပဲ ….
ငါ့လည်း ငါ့အတ္တအတွက် ငါကြွေးကြော်ချင်ခဲ့တဲ့အတိုင်း … ငါ့မှာ ရည်းစားများချင်များခဲ့မယ်
ဒါပေမယ့် ငါ့အိမ်ထောင်ဖက်အတွက်တော့ ငါဟာ သူ့နဲ့ပဲ လူပျိုဘ၀ကို ကုန်ဆုံးစေမယ် … ဒါပဲ
ကိုယ်ပြောချင်တာပြောပြီး …. လုပ်ချင်တာကို လုပ်ကြပေါ့ဗျာ ….
ဘေးကကြည့်တဲ့လူရဲ့ အမြင်ကို ပြောချင်လို့ပါ။
သူကြီးရဲ့ comment ကိုတော့ like နှစ်ခုလုပ်ထားကြပြီးတော့ သူကြီးပြောတာကို ထောက်ခံတဲ့ rabbit နှင့် windtalker တို့ comment တွေမှာ ဘာလို့ dislike တွေပေးထားကြတာတုန်း like & dislike လုပ်ထားကြတဲ့လူတွေကို ပြောပါတယ်
ကျုပ်တို့ ကွန်မင့် ကို ဘယ်သူတွေ အနီကတ် ပြ သလဲ ဆိုတာ ကျုပ် သိနေတယ် ဗျ ။ အမှန်တစ်ကယ် ကို သိနေပါကြောင်း ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှ မပြောတော့ပါဘူး ဗျာ ။ အကုန်ဆူကုန်မယ် ။ နော.. ကိုရွှေ
အပွင့်လင်းဆုံးပြောရရင် လက်မထပ်ခင် ကိုယ်လက်နှီးနှောတာ မဆန်းသောကိစ္စဖြစ်နေပါပြီ။
ခက်တာက ပြဿနာမပေါ်အောင် မနေနိုင်တတ်ကြတာရယ်။
ပြဿနာပေါ်လာရင် တာဝန်မယူကြတာရယ်က သာ ပြဿနာအစစ်လို့မြင်ပါတယ်။
အပြင်လောက က မြန်မာ့လူငယ်များရဲ့ နေထိုင်မူ့ပုံစံတွေ ရှေးကနဲ့မတူဘဲပြောင်းလဲကုန်တာ ကြာပေါ့။
အခုတလော ကြိုက်တယ် မကြိုက်ဘူးဆိုတာက အမှန်တကယ်ဖတ်ပြီးလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။
အချို့ အနီပေးထားတာတွေက ပေးစရာမဟုတ်တာကို လျှောက်ပေးနေတာပါ။
ခပ်ရိုင်းရိုင်းပြောရရင်တော့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စာဖတ်တဲ့ ကော်မင်းပေးကြတဲ့သူတွေကြားထဲမှာ
ဘာစာမှ မဖတ်ဘဲအောက်တန်းကျစွာ လာပြီး လက်ကမျဉ်းတာပါ။
ဟုတ်ပကိုတော်ကာရေ.. ဒီရက်ပိုင်းပြန်ငြိမ်းချမ်းသွားပြန်ပီ.. စိတ်ချမ်းသာစရာပဲပွဲဆူတာလည်းမကောင်းပါဝူး
ပါပဲ ကိုတော်ကာရေ ပြောချင်နေတာကြာပေါ့ဘယ်သူကိုမှမစော်ကားပဲအပြုသဘောနဲ.မန်းထားတဲ့ဟာတွေကိုတောင် Dislike လိုက်လုပ်နေကြတော့ခက်တော့ခက်သား။ကြုံတုန်းဝင်ပြောလိုက်တာ.. ကျွန်တော် LIKE ပြန်လုပ်ပေး
ခဲ့တယ်… :D :D